Archives yeSeptember 2020
Maitiro Ekutumira Mapassword Kupinda Firefox Kubva A CSV Faira
MuFirefox 79 uye shanduro dzekare, kuburitsa nekupinza pasiwedhi dzakachengetedzwa raive basa rakaoma sezvo pakanga pasina kuwedzerwa kana sarudzo dzakavakirwa-mukati kuti zviitwe mabasa akakosha. Neraki, Mozilla Firefox 80 uye yedzimwe shanduro dzinosanganisira dzakavakirwa-mukati sarudzo dzekunze nekutumira mapassword akachengetwa mubrowser. Tichishandisa zvinhu zvitsva izvi, munhu anogona kuchengetedza mapassword akachengetedzwa ku CSV faira… [Verenga zvakawanda ...] nezve How To Import Passwords into Firefox From A CSV File
Akanakisa Webhusaiti Dhizaini Matipi ebhizinesi diki mu2020
Sezvo vanhu vazhinji uye vakawanda vari kuenda online kunotenga, webhusaiti webhusaiti ndiko kudiwa kweawa. Nhasi, mabhizinesi eese saizi anoda hunyanzvi webhusaiti kune yavo yepamhepo kuvapo kuti igare yakakodzera mumakwikwi. Kunyanya iwo mabhizinesi madiki ari kukwikwidza chikamu chidiki chevateereri anofanirwa kutarisa zvakanyanya pakuvandudza kwavo pamhepo kuona kuti vagare… [Verenga zvakawanda ...] nezve Best Webhusaiti Dhizaini Matipi ebhizinesi diki mu2020
SEO Rondedzero Yemunharaunda Diki Bhizinesi Webhusaiti: Chinzvimbo Yako Webhusaiti Yemunharaunda
Mabhizimusi emuno anokwanisa zvakare kubudirira uye kubudirira neidijitari mitsva uye shanduko. Takanzwa kakawanda kuti mabhizinesi emuno uye madiki ari kutambura zvakanyanya sezvo vanhu vazhinji vachienda kunotenga pamhepo. Zvakanaka, kuve nyanzvi muindasitiri yekushambadzira yedhijitari kwemakore akati wandei, pane chinhu chimwe chete chandinogona kutaura nechivimbo. Dhijitari Kushambadzira hakusi… [Verenga zvakawanda ...] nezve SEO Rondedzero Yemunharaunda Diki Bhizinesi Webhusaiti: Chinzvimbo Yako Webhusaiti Yemunharaunda
Sezvo iyo nyowani yeMicrosoft Edge yakavakirwa paChromium, Microsoft iri kukwanisa kuunza maficha nyowani uye shanduko nekukurumidza nekukurumidza kumhanya sekuenzaniswa neiyo yekare Edge. Izvo zvakati, iyo yekare bhurawuza ine zvimwe zvinonakidza maficha, imwe yeaya kuve kugona kwePini Favorites pani kune iyo chikamu cheiyo skrini. Uye nhau dzakanaka ndeyeMicrosoft akawedzera chimiro kune iyo nyowani yeChromium-based Edge… [Verenga zvakawanda ...] nezve New Microsoft Edge inowana chinzvimbo cheEdge chimiro, sarudzo yekuvanza "Vertical Tabs" bhatani
Kana iwe uchida kuburitsa nekukurumidza gore kubva pazuva kubva muMicrosoft Excel, unogona kushandisa iro GORE basa. Izvi zvinokupa iwe kukosha kwegore muchitokisi chakaparadzana, zvichikubvumidza iwe kuti uishandise mune yakasarudzika fomula. Basa reGORE rinogona kubatsira zvakanyanya kana iwe wakashandura zvinyorwa kuita zvemazuva muExcel, uye iwe unoda kutora iwo egore kukosha kubva ku data rako. RELATED: Sei… [Verenga zvakawanda ...] nezve Mashandisiro Ekushandisa iro GORE Basa muMicrosoft Excel
Verizon nhasi yazivisa zviri pamutemo iyo LG Wing smartphone mitengo uye kuwanikwa. LG Wing yakasarudzika kwazvo, uye inobvumira vashandisi kuchinjika zvisina musono pakati peMhando Yekutanga neSwivel Mode. Mune Swivel Mode, iyo kumberi kwefoni kutenderera zvichitenderedza 90 degrees, ichitarisa iyo Main Screen mumamiriro emamiriro ekuratidzira 3.9 inch Second Screen iyo inovhura zviitiko zvitsva zvevashandisi. A… [Verenga zvakawanda ...] nezveVerizon zivisa mitengo uye kuwanikwa kweiyo LG Wing inodhura mbiri-skrini smartphone
Chromecast nyowani yeGoogle inouya nemwedzi mitanhatu yeNetflix muCanada
Vaviri vatsva uye varipo vanyori veNetflix vanozokodzera kuita chibvumirano. Izvo zvaunoda kuti uzive Rondedzero yeiyo nyowani Chromecast neGoogle TV yakaonekwa paCanada Google Chitoro. Rondedzero yacho inoratidza vatengi muCanada vanowana mwedzi mitanhatu yeNetflix neChromecast nyowani. Chromecast ine Google TV ichavhurwa padivi peNest Audio smart… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Chromecast nyowani inouya nemwedzi mitanhatu yeNetflix muCanada
Ultra Pfupi Kukanda (UST) mapurojekita inzira yakanaka yekuwana chiwoniso chikuru mukamuri diki. Zvese zvaunoita kuisa UST projekita masendimita kubva pamadziro uye ndokudaidza zuva. Asi ivo tekinoroji nyowani inodhura, seuchapupu hweSamsung Premiere Projector. Iyo inouya mumhando mbiri, iyo LSP7T ye $ 3,499.99 uye iyo LSP9T $ 6,499.99. Uye unogona kuzvitenga izvozvi. Ultra Pfupi Kukanda… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iwe Unogona Ikozvino Kutenga Samsung's Killer Nyowani Ultra Pfupi Kukanda Projekita
Google Meseji meseji bvunzo dzinoisa mumapoka hurukuro dzako kudzikisira mameseji meseji
Google iri kuyedza chimiro chakamirirwa kwenguva refu mune yayo inozivikanwa Messages app. Iyo ficha, iyo yedu tipster Hani Mohamed Bioud yakatanga kuwana, inowedzera zvikamu kumusoro kweapp, zvichibvumira vashandisi kuronga zvirinani meseji. Yekudonhedza APK ingangofungidzira maficha anogona kusvika mune ramangwana kugadzirisa kwechikumbiro, asi zvinokwanisika kuti chero chehumwe maficha isu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Google Meseji meseji bvunzo dzinoisa marongero ako ehurukuro kudzora mameseji meseji
Kiredhiti: Google Google iri kuwedzera isingagumi Sangana nemavhidhiyo mafoni evashandisi veGmail kusvika Kurume 31, 2021. Iyo perk yakatanga kugadzirirwa kupera musi waGunyana 30. Google iri kubvuma chokwadi cheakawedzera COVID-19 denda. Google isingagumi yemahara Sangana nevhidhiyo kufona maakaundi eGmail inogara kwemwedzi yakati wandei. Anotanga internet akawedzera (kuburikidza neNeowin)… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle inowedzera isingagumi Meet mafoni evashandisi veGmail kuburikidza munaKurume 2021